DualSense Nchaji ọdụ na DualSense njikwa maka PS5 [Unboxing] | Akụkọ akụrụngwa
DualSense Nchaji ụgbọ na DualSense njikwa maka PS5 [Unboxing]
PlayStation 5 Ọ ga-erute ndị ọrụ izizi jisiri ike debe ya na November 19. Agbanyeghị, ọtụtụ egwuregwu na ngwa ebugharị na-aga n'ihu otu izu ka ị ghara ịzụrụ ụzọ nnyefe ma ọ bụ ụzọ nnyefe. Na nke a, anyị anatalarị ihe abụọ kachasị mkpa PS5 ma anyị chọrọ igosi ha ya.
Chọpụta anyị ụlọ ọrụ DualSense ọhụrụ na njikwa PlayStation 5 DualSense. Mara ha nke oma na nyocha a miri emi nke anyi meworo banyere njirimara ha na oru ha, anyi biara ịgwa gi banyere ha ka i wee mara ngwa ndi i ghapuru iche na nhazi gi.
Dị ka n'oge ndị ọzọ, anyị kpebiri iso isiokwu a na-akpali ọdịnaya dị n'ụdị a video. Na ọwa YouTube anyị ị ga-enwe ike ịchọta nke a - iwepu ụlọ ọrụ DualSense na ụlọ ọrụ PlayStation 5 DualSense ọhụrụ, ngwa abụọ ga - eme ka ndụ gị dịkwuo mfe, n’enweghị mgbagha.
Anyị na-akwado ka ị gafere ọwa anyị yabụ ị were ohere isonyere obodo anyị nke ndị debanyere aha. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike iwetara gị vidiyo na ngwaahịa ndị ka mma ga-eme ka ndụ gị dịkwuo mfe site na nyocha anyị.
1 DualSense Nchaji ojii maka PS5
2 Onye njikwa DualSense maka PlayStation 5
DualSense Nchaji ojii maka PS5
Anyị malitere site na ebe a na-akwụ ụgwọ, ngwaahịa nke agbaghara m ọtụtụ n'oge oge PlayStation 4 na nke Sony mechara nwee ike idozi ya. Ihe nke mbu bu na onye njikwa DualSense ugbu a, na mgbakwunye na ugwo USB-C na-agba n’iru, gunyere ntunye ndi n’agbata Joysticks.
Nke a pụtara na anyị ga-enwe ike ịkwado njikwa ahụ n'ọnọdụ nkịtị na nke kachasị mkpa, na-enweghị ịmebata ihe ndị na-eyi dịka eriri na njikọta. N'ụzọ dị otú a, a na-eme ka ibu ahụ dịkwuo mfe.
Nke a bụ otú ekele maka igwe nchara nke gbara Jack 3,5mm gburugburu n'ihi na ekweisi anyị ga-enwe ike iji a odori ebe baptizim dị ka ime akara na na nwere ihe abụọ retractable iyi. Mgbe ị na-etinye njikwa Dual Sense, a na-etinye obere cylinder ebe 3,5mm Jack ga-aga ịmepụta akara ka mma, na ịchaji ga-amalite.
A na-akwụ ụgwọ a site na eriri ogologo dị ogologo nke gụnyere na ngwugwu ahụ, ọ bụghị site na USB-C. Eriri ahụ na-abịa na ntinye aka ya nke anyị chere na ọ ga-akwadebe iji n'otu oge kwụọ njikwa abụọ ahụ.
Zụta ụlọ ọrụ DualSense na-akwụ ụgwọ na ọnụahịa kacha mma> Jikọọ.
USB dị ogologo ma dịkwa mkpa nke na anyị nwere ike idowe DualSense Nchaji ojii ebe anyị chọrọ na-enweghị na-adọta ukwuu anya. Ezubere ebe a na-akwụ ụgwọ a n'ụzọ zuru oke na PS5 n'ihi na ọdịdị ahụ na-echetara anyị n'ihu.
O nwere ihe na-enweghị isi ma na-eji Piano Black plastic eme ihe n'otu oge na plastic na-acha ọcha maka n'akụkụ. Eziokwu bụ na ọ bụ ntọala na-akwụ ụgwọ nke ewepụtara na ọmarịcha amara ma na-egbo mkpa ndị egwuregwu niile nwere.
Ọnụ ego ahụ ekwesịghị ịbụ nsogbu, ọ bụkwa na anyị na-eche ihu ngwaahịa dị ọnụ ala. Nwere ike ịzụta ya site na 29 euro na mbụ isi nke ire ere dịka Amazon (njikọ) ma ọ bụ El Corte Inglés. N'ikwu eziokwu, ọ dị m ka otu n'ime ngwa ndị anyị na-ekwesịghị ịhapụ.
Zụrụ ngwaahịa a na ọnụahịa kacha mma na Amazon.
Karịsịa na-atụle na Sony emesiri gee ntị na obodo ahụ site na ịmebata usoro ihe eji eme ihe. na nke na-egbochi njikwa site na mgbe niile na-agbasa ọdụ ụgbọ mmiri na-akwụ ụgwọ, ihe a na-ahụkarị na DualShock 4, bụ nke pụtara ìhè site na enweghị ike ha.
Onye njikwa DualSense maka PlayStation 5
N'ụzọ doro anya, mgbe anyị zụrụ PlayStation 5 ọ na-abịa na DualSense njikwa gụnyere n'ime. N'ezie, PlayStation 5 na mgbakwunye na DualSense njikwa gụnyere USB-A ka USB-C USB, ihe anyị na-agaghị achọta mgbe anyị zụrụ DualSense njikwa iche, ihe m na-aghọtachaghị.
Iningbanye na omume nke ibelata mkpofu teknụzụ, Sony ahọrọla ịghara itinye na igbe DualSense karịa ihe ntanetị na ntuziaka ntụziaka. Anyị azụtala ihe ọzọ DualSense dịpụrụ adịpụ iji mezue ebe anyị na-akwụ ụgwọ DualSense.
Nke a DualSense dịpụrụ adịpụ bụ nke eji oji na ọcha, naanị mbipụta dị ugbu a na ahịa. Igodo ndị bụ isi ghọrọ ọcha na ọcha, na-ahapụ agba agba (akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, pink, ọbara ọbara na acha anụnụ anụnụ). Igwe azụ dị fechaa na-egosi anyị akara Sony na ọdụ ụgbọ USB-C.
Zụta DualSense njikwa maka PS5 na Amazon> Jikọọ.
Joystick na-echetara anyị ọtụtụ DualShock 4 ya na mwube ohuru ohuru na nke na adabebe roba. N'ime ndị a, anyị nwere bọtịnụ PS nke akara akara PlayStation na-anọchite anya ya ugbu a ma ọ bụghị okirikiri. Dị n'okpuru bọtịnụ a anyị nwere ohuru “Mute” nke ahụ ga - enyere anyị aka mechie igwe okwu n’otu ntabi anya (ọ na-agbanyekwa).
Maka akụkụ ha, bọtịnụ Share na Nhọrọ ha na-agbanwe agbanwe logo ahụ ma n'otu ọrụ ahụ. Trackpad ahụ na-ewere ọnọdụ etiti nke ga-eme ka anyị nwee mmekọrịta n'otu ụzọ ahụ DualShock 4. Ihe ngosi ọkụ ọkụ na-egosi ugbu a dị gburugburu trackpad a, na-ahapụ azụ kpamkpam.
Na ala anyị ga-enwe ọdụ ụgbọ mmiri Jack 3,5 mm ịgbakwunye ụdị ekweisi ọ bụla n’ụzọ dị mfe n’enweghị nhọrọ ndị dị oke ọnụ karị. N'otu ụzọ ahụ na nke a bụ ebe Nchaji atụdo maka DualSense odori ebe dị.
N'ikpeazụ, DualSense a esonyelarị usoro ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi dị ka iPhone 12 Pro (dịka ọmụmaatụ) ndị nyocha izizi ha arụpụtala ezigbo ihe. Otu ihe ahụ na-aga maka ihe mmetụta mmekọrịta na accelerometers na njikwa.
Azụ siri ike nke plastic maka njigide ka mma, na-anọchite anya bọtịnụ PlayStation a ma ama. Hapụkwa iwu DualSense ahụkarị ihe mmado na mgbe niile biri na-ehichapụ. N'ikpeazụ ugbu a, anyị nwere ọ bụghị naanị ọkà okwu, kamakwa obere igwe okwu na ntanetị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » DualSense Nchaji ụgbọ na DualSense njikwa maka PS5 [Unboxing]
You ma ma ọ bụrụ na enwere ike ịhapụ njikwa ahụ na ebe a na-ebu ibu mgbe ibu ahụ gwụchara?
Ọ bụrụ na ọ na-ahapụ ndokwasa niile oge ọ na-ebelata ihe bara uru ndụ nke batrị ????
Ndewo, enweghi nsogbu, ị nwere ike ịhapụ ya mgbe niile na ebe a na-akwụ ụgwọ ma were ya naanị mgbe ịchọrọ ya, ozugbo batrị batrị ọ ga-akwụsị ịgba ụgwọ.
Amazon ikwughachi, emezigharị na dakọtara na Dolby Atmos [AKALKỌ]